Mazuva ekupedzisira Kutambisa Mitambo Nhau - Bitcoin Odds Checker
Tichitarisa kumashure kuSupp Bowl LV kusagadzikana, zvinozivikanwa kune vazhinji kuti maSabhuku aive neruoko rwepamusoro paBuccaneers. Zvisinei, vazhinji vakashamisika pakangoridzwa muridzo wekutanga kwekota yekutanga. Iyo Tom Brady-Rob Gronkowski kubatana kwakaratidza kuyedzwa kwenguva. Vaviri veterans vanga vari pamoto […]
Zvinyorwa zvichaputswa vhiki ino, uye Bruce Arians nderimwe remazita anouya mumutsara mumwechete neuyo. Tampa Bay Buccaneers murairidzi ari mukumhanyisa kuve mukuru mukuru murairidzi kuhwina Super Bowl. Pazera remakore makumi matanhatu nemasere, anokwanisa kutyora rekodhi razvino rakachengetwa naBill […]
Asingasviki vhiki anotiparadzanisa neiyo Super Bowl LV. Zvisinei, denda riri kuenderera mberi rinogona kutyisidzira chiitiko ichi sezvo vatambi vaviri veKansas City Chiefs, mugashiri wepakati Demarcus Robinson uye wepakati Daniel Kilgroe, vaive vakanyorwa pane renji yeNFL / COVID-19. Zvinotoshamisa kuti Andy Reid haatombotyi zvachose. Murairidzi weKansas City akati […]
Sezvo Patrick Mahomes achigadzirira kurwira yake yechipiri akateedzana Super Bowl MVP mubairo Svondo inotevera, Tampa Bay Buccaneers quarterback, Tom Brady, anokodzera yechipiri yake mumwaka mishanu uye yechina yakazara. Panguva imwecheteyo, mabhuku emitambo eBitcoin anoda kuti munhu wese ave nenguva yakanaka achiisa mabheji, kuhwina mibairo mikuru, uye kunakirwa neNFL […]
Iye zvino zvatine zvikwata zviviri zvekupedzisira zvakavharirwa chiitiko chikuru cheNFL muna Kukadzi 7, tinogona kutanga kutarisa Super Bowl LV mikana yekuparadzanisa Kansas City Chiefs neTampa Bay Buccaneers. Wekupedzisira achange achitamba mutambo munhandare yavo yekumba, iyo yega inogona kukanganisa manhamba ari pakati pe […]
Isu tave takavharirwa Super Bowl LV apo matchup akaiswa pakati peTampa Bay Buccaneers uye vanodzivirira makwikwi eKansas City Chiefs munaFebruary 7 kuRaymond James Stadium muTampa, Florida. MaBuccaneers ari kuuya mumutambo pamwe neyechishanu mbeu yekupedzisa muNFC. Pamwe chete neizvozvo, Tom Brady […]
Super Bowl LV Chokwadi: Izvo Zvaunofanirwa Kuziva Uye Zvimwe
Nemitambo iri kusvika nekukurumidza yeNFL Musangano weMakwikwi, inguva yekutarisa kumberi uye kuona izvo iyo Super Bowl LV yakatichengetera. Hezvino zvese zvaunoda kuti uzive nezve chiitiko, kusanganisira zuva, nzvimbo, nzvimbo, uye NFL mikana yekutora nhanho uye kuhwina mukombe. Zuva neNzvimbo Super Bowl LV […]
Zvikwata zvina chete ndizvo zvinoramba zviri muNFL post-mwaka playoffs, ese akananga kuNFC Conference Championship 2021.Zvino ivo vatungamira vari padhuze nepfuti pazita reSupp Bowl LV, isu tinogona kutarisira Bitcoin mitambo yemabhuku yekugara imwe yeNFL inobhadhara zvikuru zvinopesana nemwaka uno. Tampa Bay Buccaneers, iyo Green Bay Packers, […]
Buccaneers Musoro Ku2021 NFC Championship Mushure meKutora Pasi Vasande
VaNew Orleans Saints vaitonga maTampa Bay Buccaneers mumwaka wenguva dzose, vachitora kuhwina kwese vachirwisa Tom Brady nevashandi vake pamberi peSvondo manheru echikamu chakatenderedzwa. Ndidzo dzinodiwa pachena kuhwina mutambo, sezvakaratidzwa neruzhinji rweBitcoin mabhuku emitambo. Nekudaro, chero chinhu chinogona kuitika muma playoffs, uye […]
2021 NFL Chikamu Chikamu Round Kufembera
Mitezo mishoma chete ndiyo inotiparadzanisa neiyo Super Bowl LV. MUSI waFebruary 7, 2021, danho rakagadzirirwa zvikwata zviviri kusangana muRaymon James Stadium, Tampa, Florida. Mutambo uyu wakatanga kumisikidzwa muLos Angeles, asi iyo NFL yakabvuma kupa chiitiko ichi kuGuta reLA muna 2022 […]